Nechiitiko chakaunganidzwa uye kuverenga nezvakakwana zviratidzo zvekuve nekutora chikamu chakakura, rutsigiro uye kubatana ... Izvo zvakarongwa kuita ino 2nd Nyika Kurume yeRunyararo uye Kusasurukirwa 2019-2020.
Zvidzidzo zvePuraneti (EP) izvo zvichamuka kubva pane zviito nemapurogiramu avanosimudza kubva kune zvevanhu, nemweya "mumwe nomumwe anotarisira zvaanotaura".
Munyika dzine PE mumaguta akawanda, Team Promoter Team ichasimbiswa. Mune aya EPs, semasangano akawanda sevanhu vanogona kutora chikamu.
Aya mapoka achapiwa senzira uye mararamiro emabasa, kutenderera, mafungiro ekubatana uye kubvumirana kwekugadzirisa zvirongwa.
La 2ªMM inotanga mukati Madrid el 2 Gumiguru, 2019, Zuva reMarudzi Rese rekusasvibisa, makore gumi mushure me 1ªMM. Ichabva muchitungamiri che Africa, North America, Central uye South, kudonha kusvika Oceania, pfuura Asia uye pakupedzisira Europe, kusvika Madrid musi waKurume 8, 2020, Zuva reVakadzi reMarudzi Mushure mekutenderera nyika nekureba kwemazuva gumi nemashanu. Inofungidzirwa kuti 2ªMM Ichaenda kuburikidza nemamwe nyika ye100 uye mazana ezviuru zvevashandi vachabatanidzwa mune izvi zvese zvekuita.